सबैकाे 'हापा ब्रो!' -
११ श्रावण २०७७, आईतवार ०९:२०
सबैकाे ‘हापा ब्रो!’
आउट अफ फोकस
खवरबाटिका ११ श्रावण २०७७, आईतवार ०९:२०
बिहान ६ बजे उठेपछि अनसन चोकमा उफ्रिदै शुरु हुन्छ हापा ब्रोको दैनिकी ! व्यास नगरपालिकाको फोहोर संकलन गर्ने ट्याक्टरको आवाजसंगै सफासडक र अनसन चौतारा क्षेत्रमा दौडने गर्छन, हापा ब्रो । व्यास नगरपालिकाका सरसफाई कर्मचारीलाई उसले सम्बोधन गर्ने शब्द हो, दाई… दाई….। बजारबासी र आगन्तुकले गरेको फालेको फोहोर बटुल्दै हापा ब्रो नगरपालिकाका सरसफाई कर्मचारीलाई फोहोर दिन्छन, गाडिमा हाल्छन। घामपानीको वास्ता नगरी धेरै वर्षदेखी यसरी नै बिहान विताउँदै आएका छन हापा ब्रो ।
२०५२ मा जन्मेका हाप्रा ब्रोलाई दमौलीबासी मानसिक विरामीको रुपमा लिन्छन । जन्मने क्रममा टाउँको भुइमा खसेका कारण उनमा त्यस किसिमको समस्या देखा परेको परिवारको बुझाई छ। उमेरसंगै मानसिक समस्या पनि बद्दै जादाँ कहिले काँही उसले देखाउने बानी व्यवहारले बाटो हिड्ने बटुवा लज्जित बन्न बाध्य हुन्छन । प्रायजसोः सामान्य अबस्थामा देखिने हापा ब्रो कसैले जिस्काउँदा भने अल्लि पृथक स्वरुपमा देखिन्छन। दमौली बासीले उसलाई जुराई दिएको नाम हो, ‘हापा ब्रो’ ।
सांसद श्रेष्ठले व्याक्तिगत तर्फबाट बाढी पहिरो पिडितलाई सहयोग
राजुकाे उपचारका लागि अमेरिकाबाट ३ लाख २९ हजार सहयाेग